I "umgwaqo ukuphathwa 1c": incazelo, imfundo, ukulungiswa kanye nokubuyekeza
Kuleminyaka engamashumi amabili, amakhompyutha bakwazi ukungena kangaka ngokuqinile ekuphileni kwethu kwansuku zonke ukuthi manje kunzima ukucabanga ukuthi sahlala ngaphambi ngaphandle smart nobuchwepheshe. A indima ekhethekile udlalwa software ezikhethekile, njengoba ngaphandle kwalo computer, ngisho nabantu abanamandla kakhulu, ezinenani elincane.
Software "Lawula 1c iloli" iye ngokukhethekile zenzelwe ngokugcwalisa waybills ngebelo sivunyiwe Apreli 26, 2011, Inombolo 347. Ngokwesibonelo, umklamo yale mibhalo senziwa nekuhambisana oda 29 Juni ngawo lowo nyaka, inani 624, kanye ucabangela yonke izinguquko ezenziwe Januwari 24, 2012, inombolo 31n.
isofthiwe kunenzuzo ngoba ikuvumela ukuba ukushintsha ngokugcwele inqubo ukugcwaliswa kanye ukulethwa waybills kuzo zonke izinhlobo zezinhlangano, futhi kusiza umsebenzi walabo izisebenzi kukhona ngqo obhekene nale nqubo.
I "ukuphathwa umgwaqo 1c" hhayi kuphela ngcono indlela izisebenzi ezisebenza ngayo, kodwa futhi kungaba ngokuphawulekayo ukunciphisa inani ochwepheshe, egcwele ngokugcwele 'lwephepha' umsebenzi kuphela. Lokhu kufezwa ngokusebenzisa degree ezibanzi ezishintshayo zonke izinqubo ezihlobene inhlangano ezokuthutha.
Prakthiza selukhombisile ukuthi kuleli cala ezenzakalelayo okungenani u-80% kuzo zonke izinqubo ejwayelekile, kuhlanganise nalezo ezihlobene ne-isitoreji kanye nokunyakaza izimpahla ezithunyelwe ithunyelwa. Yiqiniso, ukuze sifinyelele umphumela oyifunayo kubalulekile ukusebenzisa amamojuli ezikhethekile 1c ( "Warehouse ka-", isibonelo).
Imikhawulo okufushane abasebasha
Ezimweni eziningi, le nkampani izoba yini ukusondela (futhi ngoba - eshibhile) omncane engenathi nguqulo ye "1c izimoto ukushayela." Kuphela uma kubalulekile ukuba nikhumbule ukulinganiselwa ngawo ochwepheshe kungaba uhlangabezane nazo:
Nge ngamunye base ethize ngesikhathi esifanayo kungenziwa kuphela eziqhutshwa elilodwa isisebenzi.
izinguquko Ukucushwa ukwenza kungenzeki asekelwe isixazululo namazinga kanye nokubuyekezwa kwayo.
Ukusebenza "amaklayenti-server" format ezimbi zingenza nokuhlukileko.
Uma inkampani idinga lezi zici futhi ufuna ukuba icubungulisise ukushintsha ukucushwa elandelayo kumele isetshenziswe: "ukuphathwa umgwaqo 1c Trác" noma "1c: Enterprise 8.2", okuyinto kuhluke ukusebenza okugcwele, kungenzeka ubhalwe kabusha "ngokwalo", futhi ingasetshenziswa amamojuli ngaphezu kwalokho ebhaliwe.
The kungenzeka izinguqulo ezindala are banzi kakhulu. Kubaluleke ngokukhethekile ukuthi iyiphi 1c uMklami nolwazi oluyisisekelo zohlelo bazokwazi ukuthi adale-plug-in kudinga ibhizinisi izixazululo ethize imisebenzi kahle ichazwe.
Izici eziyinhloko isofthiwe
Kukhona kungenzeka ukugcwaliswa okuzenzakalelayo nokuprinta ishidi "Ulwazi mayelana nsuku zonke uhlu ukusatshalaliswa" lapho lonke ulwazi olufanele kuyobonakala. lwenteke Ngakho isigaba sesine komyalelo wokungabi 24 Januwari 2012, isibalo 31n. Uhlelo futhi saba nethuba ugcwalise ifomu № 16-WH (okutshengisa imbangela eqondile sokukhubazeka yesikhashana).
Ikhodi ntathu Datamatrix isesakhiweni, oluthobelana ngokugcwele izidingo ezisebenza izinhlelo ukushintsha idatha entry amashidi travel. Ngo test (eside) Imodi, futhi isekela imibhalo electronic, idatha okuyinto etholakala imizila ukuqapha satellite nesikhathi ukusebenza. Kukhona ukwesekwa hardware for ibhakhodi ukuskena:
Ufake ngokuzenzakalela inombolo ifomu, okuyinto ngekhodi ikhodi.
Kunalokho, kungenzeka ukukhombisa idatha inombolo ukuthi okubhalwe ku bar code.
Njengasendabeni yabase langaphambilini, inguqulo oluphansi "umgwaqo Office 1c 8.2" Asisekeli lonke uhla ngamathemba, ebihlelwe ekuqaleni wakhulelwa onjiniyela. Ngo izinguqulo ezindala ze-uhlu isofthiwe lemisebenzi esingenzeka ngobubanzi okuningi:
Ukudala ebhukwini ahlukene yokwebiwa, elahlekile noma ezilimele ngenhloso nalutho waybills. Lena ikakhulu amabhizinisi ezinkulu, okuyinto ngenxa ukudideka yansukuzonke kungenzeka ukweba imiculu lenjalo.
Ukudala imibiko befaka baye basebenzisa amapheshana sokukhubazeka yesikhashana, ukuze ukushaja ngokugcwele esibhedlela abashayeli forwarders.
Ngisho ku inguqulo eyisisekelo kungenzeka ukushintsha layout imibhalo.
audit ezigcwele zonke izinguquko ezenziwe amashidi travel. Sekukonke, egciniwe avuselelwe kuzovimbela noma yimiphi imizamo lokukhwabanisa.
Ukugcina zokulawula ukufinyelela ngale mibhalo. Kanjalo, futhi, uma nokwanda okuphawulekayo ukuphepha kanye inzuzo inkampani.
umsebenzi Special - ukuqinisekiswa (ukuqinisekiswa) izitifiketi wezokwelapha yesikhashana ukungakwazi abashayeli kanye nabanye abantu. Mhlawumbe kuphela version amadala "Ukuphatha umgwaqo 1S 8.2", kanye nokuba khona amalungiselelo anembako nezinhlangano zabantu emazingeni aphansi.
Kukhona kungenzeka yokugcwalisa waybills futhi oda, nsuku zonke egameni izinhlangano eziningana.
Uhlelo ukwazi ukulungisa uhlelo futhi ukwenza umzila wiring kwemibhalo ukuthi niye nagcwaliswa kwezinye izinhlangano.
Kwifomu ungakwazi yokuphinde banyathelise iyiphi ezihlukahlukene oyifunayo emasimini eside ngangokunokwenzeka ukukhulula isikhala efomini. Lize ikuvumela ukuba wenze "1c izimoto ukushayela Standard".
traffic isilawuli isikhathi isikhathi elibukhali ngesisekelo umthetho 24 Januwari 2012, isibalo 31n.
Kanjani ulwazi yabiwa nabanye izinhlelo Imininingwane
Isici esibalulekile yikhono uhlelo ukulayisha idatha yekhasimende kusuka ngamafayela isiphi isakhiwo. Lezi zihlanganisa imibhalo ejwayelekile umbhalo cishe zonke lokubhala, kanye nezakhiwo ezivamile - XLS kanye DBF, okuyinto avame ukusetshenziswa lapho kwenziwa umbhalo yisiphi isikhungo umsebenzi wabo ngandlela-thile exhunywe ne ukuhlinzekwa kwemisebenzi yezokuthutha.
Ifomu Kungashiwo okufanayo zithululwe futhi ngomumo eyenziwe umzila amashidi. Kanjalo, isimiso "1c: Ukuphathwa umgwaqo" ivumela ukulungisa ukuxhumana ngempumelelo phakathi nezinkampani eziningi.
Ukugcina imibhalo emafomini eziphathelene kutiphendvulela esiqinile
Kuyaziwa ukuthi amarekhodi kwifomu kwemibhalo eminingi ephathelene nokuziphendulela esiqinile, akufanele eqele ngalé amaseli eziye engabelwe amarekhodi abo, futhi ayikwazi mbeni imingcele yabo yaziwe. Ukuba yinkimbinkimbi eqinisweni lokuthi ifomu ngokwayo inombolo efanele izici ezithile, okuyinto kube nzima ukuphrinta kuso siqu imishini ihhovisi ezivamile:
Usayizi eziseceleni kwesokunxele nakwesokudla - 4 kuphela mm.
Ukuze ukuqashelwa ikhodi ntathu ingafundwa yibo bonke, ehlelelwe unethemba amadivayisi adinga isinqumo iphrinta ka 600 dpi.
Kunconywe ukusebenzisa iphrinta
Oki and HP amagatsha izinkampani ezweni lethu athuthukiswe ngqo ezinye izincomo ukuthi nje unikeze ikhambi lale nkinga. Ukuze ubone imiphumela yabo umkhuba, amasampula elandelayo imishini yokunyathelisa zanikezwa ehhovisi 1c:
Wonke amaphrinta ngenhla ikufakazele kungenzeka empirically yohambo amashidi yanyatheliswa ngo ifomu oyifunayo. Olunye ulwazi mayelana uhlu amaphrinta efanelekayo kungasiza ifayela "1c: 8.3. ukuphathwa komgwaqo. " Qaphela ukuthi le software iye eqinisekisiwe iziphathimandla ezifanele ezweni.
Mayelana ukubaluleka Ukuvuselela ...
Godu kuthiwani nengabe azikho amaphrinta ku onobuhle ngenhla yenhlangano? Ungakhathazeki, ngoba inkampani njalo wahlanganyela 1c accounting onobuhle ezisanda kukhiqizwa of imishini ihhovisi kanye isingeniso yabo okwalandela ifakwa kurejista ekhethekile. Kungenzeka, uma iphrinta ayibhekiseli into umndeni omusha kakhulu, uzobe kahle kunqunywa iyiphi 1c hlelo, kodwa kuphela uma ngesisekelo zokugcina olusha njalo.
amanothi Jikelele ekusebenziseni uhlelo
Kanjani "1c: Ukuphathwa endleleni"? Manual yomsebenzisi uyonika Imininingwane okuningi, kodwa thina uyonika ulwazi oluyisisekelo emakhasini le ephepheni. Okokuqala, kufanele ufake uhlelo. Lokhu kwenziwa esezingeni, kodwa umakhi uncoma kakhulu uma sikubeka impande drive "C".
Kulokhu, "1c: Enterprise 8. Ukuphathwa motor ezokuthutha" eziyosebenza isheshe njengoba semininingwane nangenkomba iqala ukuthatha indawo ngokushesha okungaka. Uma sicabangela "Amathrendi" eminyakeni yamuva, onjiniyela batuse ukufakwa uhlelo SSD (isimo okuqinile) oshayelayo disk ezifana lokukwazi show wokufundwayo okungahleliwe isivinini. Lokhu kubaluleke kakhulu lapho esebenza yolwazi enkulu bezinkampani ezinkulu. Cabanga inqubo yokudala indinganiso base yokusebenza:
Vula "Explorer» Windows uhlelo, bese ukuya lwemibhalo ukusebenza (okusho ukuthi, ifolda) Uhlelo.
Vula imenyu yengqikithi ngokuchofoza inkinobho yegundane kwesokudla, ukhethe ikhathalogi oyifunayo.
Namathisela ifolda lwemibhalo oyifunayo besebenzisa imenyu umongo igundane noma sekhibhodi Ctrl V
Nalapha futhi, chofoza ifolda, qhafaza kwesokudla, ukhethe "Qamba kabusha", nika igama ifolda oyifunayo.
Ukubhaliswa egciniwe entsha
Ngokushesha ngemva iwindi kwethulwa kuyovela lapho database okudalwe uzodinga ukuthi ubhalise. Qaphela ukuthi ngemva lo msebenzi (kulula ukwenza, njengoba kukhona Amacebo), uthinte ifolda okudalwe, susa noma kabusha, sinconywa!
Ngaphezu kwalokho, it is hhayi Kunconywa ngisho namakhophi Shumeka ifolda efanayo (wadala Ivolumu Shadow Kopisha Izikhungo). Uma ufuna into ngokuphelele ukushintsha, kungcono ukwakha egciniwe entsha bese ukungenisa okuqukethwe endala lwemibhalo. Esimeni lapho umsebenzisi engalandeli salo mthetho, ukusetshenziswa ngemfanelo kohlelo ayiqinisekile.
Kalula nje, "1c: Ukuphathwa Trac komgwaqo" isekela imikhuba ukuphathwa ejwayelekile yokutholwa OS umndeni "windose", okuyinto kusiza kakhulu nokwenziwa abasebenzisi abangenalwazi zohlelo. Lokhu kunciphisa Ukuphumula futhi ikuvumela ukuba ugcine yenzuzo yenkampani ezingeni elifanayo.
Indlela ukuhlola abasebenzisi Uhlelo ukuphela?
kanjani abasebenzisi ukuhlola uhlelo "1c: Enterprise 8. Ukuphathwa motor ezokuthutha"? Izibuyekezo abonisa ukuthi abasebenzi like isofthiwe isethaphu lula, kanye okunengqondo, isakhiwo ukubacabangela izakhi esibonakalayo.
1c Inkampani isebenza kanzima emkhakheni nokwenza ikhodi hlelo. Uma izinguqulo ngaphambili kwakunzima "isihlamba" e ngesivinini, ukukhishwa zakamuva ukusebenza ngokushesha ngempela, futhi ukufeza le asikho isidingo ukuvuselela ngokuphelele yonke imikhumbi computer ibhizinisi.
Kanjalo, isimiso "1c: Ukuphathwa motor ezokuthutha" inguqulo 8-th - i choice omuhle ngoba zonke izinkampani yesimanje. Ukuqala kokusetshenziswa le iphakethe software inkampani zizonciphisa isikhathi kanye zabasebenzi, nokwandisa izinqubo ezokuthutha.
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ohlweni Apple Umculo? Indlela ukukhubaza ukubhaliswa ku-Apple Umculo?
Kuhle Sefayela le-Android
Umnikazi we inethiwekhi "uzibuthe" Sergei Galitsky: Biography nesithombe